के हो ? ‘ब्ल्याक कर्न’ अर्थात कालो मकै – rastriyakhabar.com
के हो ? ‘ब्ल्याक कर्न’ अर्थात कालो मकै
‘ब्ल्याक कर्न’ एक विशेष प्रजातिको मकै हो । यी मकैमा कालो रंगद्रव्य भएकाले, यसका गेडा कालो रङ्गको हुन्छ । ‘ब्ल्याक कर्न’ को पौष्टिक मूल्य साधारण मकैभन्दा उच्च भएकाले यसको उपयोगिता धेरै छ । स्वादको हिसाबले कालो मकैमा हुने चिनीको मात्रा ११.९५ प्रतिशत हुन्छ, जुन साधारण मकैभन्दा ३ गुणा धेरै हुन्छ ।
परम्पारिक रूपमा कालो मकैको प्रयोग मेक्सिकोको मौलिक खाजाहरूमा सताब्दीऔं देखि प्रयोग हुँदै आएको रहेछ ।
— यसलाई तरकारी झैँ तरेर रोटी वा ब्रेडसंग खान सकिन्छ ।
— ब्ल्याक कर्न उसिनेर स्यालेड बनाई पनि खान सकिन्छ ।
— ब्ल्याक कर्नलाई शीतल ड्रिंक (पिए पदार्थ) बनाएर पनि पिउन सकिन्छ । ब्ल्याक कोर्नको पल्प कुनै पनि जुस, साधारण पानी सँग पिउन सकिन्छ । कुनै पनि ककटेल वा मोक्टेलसँग ब्ल्याक कर्न सुहाउँदो मिश्रण हुन सक्छ ।
फ्रिजरमा भण्डारण गर्दा खोया सहित स्टोर गर्दा राम्रो हुन्छ । खोयाबाट छोडाएर भण्डारण गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
— एन्टीऑक्सीडेंटको पावर हाउस मानिन्छ (विकृत कोणहरू नष्ट गर्न मद्दत गर्दछ)
— एन्टीइफ्लाफेसन (शरीरको कुनै पनि दुखाई कम गर्न मद्दत गर्दछ)
— प्रोटिन (१०० ग्राम कालो मकैमा करिब ८ प्रतिशत प्रोटिनको मात्रा हुन्छ भने साधारण पहेँलोमा ५ प्रतिशत प्रोटिन हुन्छ ।)
आइरन, म्यास्नेसियम, फोस्फोरस र भिटामिन ‘ए’
‘ब्ल्याक कर्न’को उब्जनी कहाँ हुन्छ ?
दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूमा ‘ब्ल्याक कर्न’को उब्जनी हुन्छ । ‘ब्ल्याक कर्न’को बोट धेरै ठुलो हुँदैन । सामान्यतया ४ देखि ५ फिट लामो हुने गर्दछ । उच्च तापक्रममा गहिरो बलौटे माटोमा ‘ब्ल्याक कर्न’ राम्रोसँग फल्छ । खडेरीको समयमा पनि ‘ब्ल्याक कर्न’को बिरुवा हुर्कने बढ्ने क्षमता राख्दछ । ‘ब्ल्याक कर्न’ गर्मी र जाडो दुवै मौसममा उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा पनि व्यावसायिक रूपमा ‘ब्ल्याक कर्न’ को खेती गर्ने अध्यन तथा तयारी भई रहेको छ ।
नास्टको राईस रिसर्च युनिट लगायत केही कृषिका निजी अनुसन्धान केन्द्रहरूले पनि ‘ब्ल्याक कर्न’ मा काम गर्न सुरु गरेका छन् । नेपालका संस्थाहरूले चीनबाट बिउ मगाएर काम गर्ने तयारीमा अघि बढिरहेका छन् ।